विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न पुरातत्वको स्वीकृति « Naya Page
विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न पुरातत्वको स्वीकृति
काठमाडौं, १४ कार्तिक । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पशुपति क्षेत्रको विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागबाट ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत भएको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्राचीन स्मारक संंरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको छ । विभागबाट ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत नभएको, बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारण भत्किएको पाँच वर्षसम्म पनि विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माण शुरु हुन सकेको थिएन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माण शुरु गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्दिरसहित वरिपरिको सत्तल पुनर्निर्माणका लागि रु ७० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आव २०७८–२०७९ सम्ममा मन्दिर क्षेत्रको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य कोषले लिएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि ठेक्काको प्रक्रिया शुरु भइसकेको कोषका निर्देशक भरत मरासिनीले बताए । यो महिनामै ठेक्का गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भए पनि लागत पूर्वानुमानको पुनः समीक्षा भने जारी रहेको कोषले जनाएको छ ।
हनुमानढोकाको लायकू बहाल क्षेत्रमा बेवारिसे रहेको मूर्तिलाई जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो शासनकालमा पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा स्थापना गरेको इतिहास छ । प्रतिमाशास्त्रका पुस्तकहरुमा विश्वरूपको वर्णन गर्दा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरलगायत सबै देवता समाहित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विष्णुको विश्वरूप स्वरूप लिच्छविकालदेखि नै नेपालमा प्रसिद्ध रहेको थियो । चाँगुनारायणमा विष्णुको विश्वरूप मूर्ति छ । गीतामा वर्णन गरिएअनुसार महाभारत युद्धमा कृष्णले अर्जुनलाई देखाएको स्वरूपकै आकार चाँगुमा रहेको कोषले प्रकाशन गरेको ‘पाशुपत क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदा (मूर्त र अमूर्त)’ नामक ग्रन्थमा उल्लेख छ ।
चाँगु र मृगस्थली क्षेत्रमा रहेको विश्वरूप मन्दिरका बीच मेल नरहेको ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यहाँको मन्दिरमा विश्वरूप र विश्वरूपा एवं कामेश्वर र कामेश्वरी आलिङ्गन गरिरहेको मुद्राको मूर्ति छ ।
सेयर ब्रोकरलाई एक दिनकै कमिसन ६ करोड ४२ लाख, कसलाई कति ?
अब बलात्कार घटनामा मिलापत्र गरे कडा सजाय
निजगढ विमानस्थल : गुरुयोजना बनाउने कम्पनी छनोट
काठमाडौं, ८ मंसिर । आइतबार सेयर बजारमा ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदा लगानीकर्ताले
काठमाडौं, ८ मंसिर । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले नवौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मुलुकलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाएर